Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Thailand Indho La'aa Qulqulka COVID-19: Wuxuu riixayaa Phuket Sandbox
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Dakhliga Sandbox ee Phuket ayaa ka muhiimsan caafimaadka
In kasta oo ay sii kordhayaan kiisaska COVID-19 dhammaan Thailand oo dhan, afhayeenka Xarunta Maamulka Xaalada Dhaqaalaha (CESA), Thanakorn Wangboonkongchana, ayaa maanta sheegay in ololaha Phuket Sandbox ay tahay inuu sii wado hagaajin joogto ah oo la sameeyo si wax looga qabto caqabadaha.
Phuket waxay iibisay 335,000 hoteellada hoteelka muddadii Luuliyo-Sebtember ee ololaha Sandbox-ka.
Wadarta bartilmaameedka dakhligu waa 8.9 bilyan oo baht (US $ 265.9 milyan) muddadan saddexda bilood ah.
Sanduuqa Phuket Sandbox tan iyo markii la bilaabay wuxuu durba soo saaray ku dhawaad ​​1 bilyan oo baht (US $ 29.9 milyan).
Dooddu waxay tahay in ololaha heerka uu hadda marayo uu durba gacan ka geystay abuurista shaqooyin, isagoo diyaarinaya soo jiidashada xilliga dalxiiska ee ugu sarreeya dhammaadka sannadka. Dawladdu waxay ku tilmaamaysaa natiijada ololaha Phuket Sandbox mid wanaagsan, horayna u sii socota si dib loogu furo dalxiisayaasha la tallaalay, laga bilaabo gobolka jasiiradda Phuket.
Wangboonkongchana wuxuu sheegay in dawladdu ay rajaynayso in ololuhu uu arko dhaqdhaqaaq kordhay bilihii Ogosto iyo Sebtembar, iyada oo bartilmaameedka booqdayaasha lagu qiyaasay 100,000 oo qof bilaha Luulyo-Sebtembar, iyo bartilmaameedka dakhliga oo dhan 8.9 bilyan baht (US $ 265.9 milyan) isla muddadaas. Wuxuu ugu baaqay dadka tuulada ku nool inay noqdaan martigaliyayaal wanaagsan martida, iyaga oo siinaya aragti wanaagsan iyagoo sugaya amnigooda.
Ololaha dib -u -furista dalxiiskii tijaabada ahaa ee Thailand Sanduuqa Phuket Sandbox waxay durba soo saartay ku dhawaad ​​1 bilyan oo baht (US $ 29.9 milyan) oo ah lacag kaash ah tan iyo markii la furay bishii hore waxaana ilaa hadda la soo dhoweeyay ku dhawaad ​​17,000 oo qaxooti caalami ah, halka wadar ahaan 335,000 hoteellada la seexdo habeenka Luuliyo-Sebtember.